यसरी गरौं टर्की पालन – NewsAgro.com
यसरी गरौं टर्की पालन
July 8, 2018 newsagro0Comments यसरी गरौं टर्की पालन
यो समाचार 3420 पटक पढिएको
प्रो. डा. मोहनप्रसाद शर्मा
माथिको तालिका अनुसार शुरुको उमेरमा २८ प्रतिशत सिपि भएको दाना दिईन्छ । त्यसपछि चल्ला ठूलो हँुदै जाँदा प्रोटीनको मात्रा घटाउँदै जानु पर्दछ । यसरी टर्कीलाई विभिन्न तहको उमेरमा विभिन्न मात्रामा प्रोटीन र शक्ति भएको दाना दिनु पर्छ ।
एउटा वयस्क भाले टर्की २४ हप्तामा १.३ मी अग्लो र १२ देखि १५ किलो तौल सम्मको हुन्छ । यस्तै पोथी टर्की भाले भन्दा सानो र ८ देखि १० किलो तौल सम्मको हुन्छ । टर्कीको भाले, पोथी पहिचान १२ –१३ हप्ताको उमेरमा गर्न सकिन्छ । ५ वटा पोथीको लागि एउटा भाले संगै राख्नु पर्छ । पोथीले आठ नौं महिना देखि फुल पार्न शुरु गर्छे । फुल ८० –८५ ग्राम तौलका हुन्छन् । फुल २८ दिन सम्म कोरले पछि चल्ला निस्कन्छ । टर्की ठूलो चरामा पर्ने भएकोले यिनिहरु ३ वर्षमा वयस्क हुन्छन् । टर्कीका चल्ला पनि कुखुराको चल्ला जस्तै हुर्काउन सकिन्छ । वढी नाफा कमाउन तालीकामा देखाए जस्तै उचित दाना पानी दिएर २०–२४ हप्ता उमेरमा वेच्नु पर्छ ।
लामा दिनमा टर्कीको विकास छिटो हुन्छ तर दिन छोटो भएपनि तापक्रम ६५ ड्ढ फारेन हाईट र दिन ११ घण्टा वा त्यो भन्दा वढीको छ भने पनि तिनीहरु छिटै वयस्क हुन्छन् । धेरै फुल उत्पादन गर्नको लागि पोथीलाई १८–२२ हप्ताको उमेरवाट अध्यारोमा राख्नुपर्छ । अध्यारोमा राख्दा १८–२० हप्ता उमेरमा ८ घण्टा प्रकाश तथा १६ घण्टा अध्यारो र २०–२२ हप्ता उमेरमा ६ घण्टा प्रकाश तथा १८ अध्यारोामा राख्नु पर्छ । यदि अध्यारोमा राख्न ढिला भयो भने २२ हप्ताको उमेरमा ४ घण्टा प्रकाश दिने र २० घण्टा अध्यारोमा राख्नु पर्छ । अध्यारोमा राखेको समयमा राम्रो हेरचाह पु¥याउनु पर्छ ।
← कृषियोग्य जमिनमा अंशबन्डापछि पनि घर बनाउन नपाइने
छ वर्षपछि त्रिवि रामपुर क्याम्पसमा कृषिको पढाई शुरु →
सरकार ! वीरगञ्ज कृषि औजार कहिले खुल्छ ?, १० अर्बभन्दा बढीको बजार
अलैंची, अदुवा र बेसारको उन्नत खेती प्रविधि
कसले खायो एक करोडको जैतुनको बिरुवा ?
May 1, 2018 newsagro 0